हिना खान किन डराइन् ? सिद्धार्थको अन्तिम संस्कारमा समेत जान सकिनन् – Classic Khabar
September 4, 2021 96
बलिउड अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाको आकस्मिक मृत्युले टिभी उद्योगलाई स्तब्ध बनाएको छ। दुई दिन बितिसक्दा पनि, मानिसहरु स्वीकार गर्न सकेका छैनन् कि अब सिद्धार्थ छैनन् । सिद्धार्थ अब एक मुस्कान संग यो संसार बाट बिदा भएका छन्। यस्तै स्थिति टिभी अभिनेत्री हिना खानको पनि छ। हिना सिद्धार्थको साथमा बिग बोस १४ मा ुतुफानी सिनियर्सु को रुपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनी सिद्धार्थको मृत्युको खबर सुनेदेखि नै निराश छिन्। हिना खानले यसबारे ट्वीट गरेकी छिन्।
हिनाले ट्वीट लेखिन्उ नको मानसिक अवस्थाको बारेमा बताउँदै हिना खानले ट्वीट गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छन्, ुजब हामीसँग जीवनको मीठो अनुभव हुन्छ, तब हामी जीवनलाई अझ राम्ररी बुझ्छौं। तर जीवन एक धेरै अप्रत्याशित तरीकामा प्रकट हुन्छ। म यो कठिन समयमा सिद्धार्थको परिवारलाई सान्त्वना दिन चाहन्छु। म तपाइँ सबैको लागि मनको शान्तिको लागी प्रार्थना गर्दछु।
अर्को ट्वीटमा हिनाले भनिन्, ‘मेरो पुरानो भारी घाटाको कारण मेरो मानसिक अवस्था पनि राम्रो छैन। म डराएको छु र दुखी छु कि मेरो साथी अब यस संसारमा छैन। म यो समाचार बाट उहाँका अन्य प्रशंसकहरु जस्तै धेरै स्तब्ध छु। म बिरामी छु र तपाइँ सबै जस्तै, म मेरो साथीको मृत्युको खबर बाट गहिरो बिचलित छु ।
हिना खानले केही दिन अघि मात्र आफ्ना बुवा गुमाएकी थिइन् । बुवालाई गुमाएको पी डा सहन गर्न नसक्दै उनले सिद्धार्थ जस्तो साथी गुमाएकी हुन् । उनी अस्वस्थ्य भएका कारण सिद्धार्थमो अन्तिम संस्कारमा समेत जान नसकेको बताइन् । बवा गुमाएको चिन्तामा अस्वस्थ्य भएकी उनी साथीको यस्तो खबरले थप बिचलित भएको बताएकी छन् ।
Nextबिर अस्पताल अगाडिबाट १८ वर्षका दुईजना पक्राउ ! यो उमेरमै गरे बिश्वासनै नलाग्ने यस्तो काम